AKHRISO:- Ururka midowga culumada Muslimiinta dunida oo doortay hoggaamiye cusub – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaAKHRISO:- Ururka midowga culumada Muslimiinta dunida oo doortay hoggaamiye cusub
AKHRISO:- Ururka midowga culumada Muslimiinta dunida oo doortay hoggaamiye cusub
Hiiraan Xog, Ururka ay ku mideysanyhiin culumada Muslimiinta dunida oo todobaadkan ku shirsanaa magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga ayaa caalimka weyn ee reer Marooko, Axmed Reysuuni u doortay guddoomiyaha midowga culumada isaga oo baddalaya Dr. Yuusuf Qardaawi.
Doorashada Reysuuni ayaa gabgabo u ahayd kulanka golaha loo dhanyahay ee ururka oo ay kasoo qeyb galeen 1030 qof oo culumo ah iyo waliba 50 hey’adood oo ka shaqeeya arrimaha horumarka Muslimiinta dunida.
Bogga Twitter-ka ee ururka ayaa lagu sheegay in Axmed Reysuuni uu helay 93% guud ahaan codadkii loo riday doorashada oo ay ka qeyb galeen boqollaal qof oo xubno ka ah ururka waxaana xusid mudan in mudanaha imika xilka loo doortay uu horay u ahaa guddoomiye ku xigeenkii ururka.
Shirkan ay marti galisay Istanbuul ayaa ahaa kulkankii ugu ballaarnaa ee uu yeesho ururka tan iyo markii seeska loo dhigay sanadkii 2004-tii waxaana muddo saddex maalmood socday kulamo iyo doodo lagu lafa gurayay dib u qaabeynta bulshada Muslimiinta ah hadii ay ahaan lahayd dhan siyaasadeed,dhaqaale iyo bulsho.
Shirka ayaa sidoo kale lagu qaadaa dhigay wadiiqadii lagu gaari lahaa dib u heshiisiin loo sameeyo qeybaha ay ka koobantahay bulshada Muslimka ah oo ay ugu horreeyso isla jaanqaadidda madaxda iyo shacabka iyo sare u qaadidda xiriidhka ka dhexeeya madaxda naf ahaantooda si loo soo af jaro is af garan waaga dhex yaalla bulshada Muslimka ah.
Dhanka kale doorashada guddoomiyaha ururka waxaa iyana hareer socday doorashada xoghayaha guud ee ururka iyo kaaliyayaashiisa, ururka ayaa sheegay in doorashada ay u adeegsadeen teknoolajiyad casri ah si loo ilaaliyo daah-furnaanta doorashada iyada oo goob joog ay ka ahaayeen khubaro dhanka sharciga iyo garsoorka ah oo aan iyagu wax xiriir ah la lahayn ururka.
Hadal uu guddoomiyihii hore ee ururka, Dr. Qardaawi uu ka jeediyay golaha ayuu ku yiri “ururku wuxuu qabtay muddadii uu jiray howlo baaxad leh, culumada Muslimiinta ee golahan fadhiyaana waxaa saaran amaano iyo xil aad u culus oo ay tahay inay gutaan”.
Madaxweynaha Soomaaliya oo kulan la qaatay gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya